အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးတင်ပြခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးတင်ပြခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစာနာဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄)ရက်၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်နေ့ ၁။ ၂.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိပ်မ...
Survey Link - A Comprehensive Quarterly Survey Reviewing the Status of Businesses in Myanmar
www.surveymonkey.com/r/FRLXBFN Dear Business Owner,"How is your business doing?"To measure the impact Covid-19 outbreak and reflect the sentiment of the businesses, organizations around the globe are conducting surveys respectively. Likewise, MMRD-Business Insight is obligated to truly understand...
မြန်မာနိုင်ငံကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံး နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းရာထူး(၂)နေရာအား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် -
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသည့် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး နှင့် ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ၁၁.၅.၂၀၂၀ရက်နေ့ ၊ နံနက်ပိ...